सुस्मिताले निधन हुनुअघि लेखेको डायरी प्रहरीको हात लाग्यो, ह’त्यामा अरु पनि संलग्न ! (भिडियो हेर्नुस्) – Sandesh Munch
प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा सुस्मिताले निधन हुनु अघि लेखेको डायरी पनि फेला पारेको छ । उनले निधन हुनु अघि डायरी लेख्ने गरेकी थिइन् ।
सुस्मिताको आमाले घटनामा सुस्मिताको ससुरा र एउटा नन्द मात्र होइन अर्को छोरी र ज्वाई पनि सहभागी भएको हुनसक्ने दावी गरेकी छन् । प्रहरीले पनि आफुलाई त्यस्तै संकेत गरेको बताएकी छन् । प्रहरीले अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने भएकाले केही दिन लाग्छ भनेर आफुलाई प्रहरीले भनेको बताएकी छन् ।
Prevफेसबुक लाइभमा आएर यी युवतीले गरिन् यस्तो ! एलिसाबारे यस्तो खुलासा
Nextभर्खरै सुस्मिता थापाको फेसबुक चेक गर्दा यस्तो रहस्य भेटियो हरे भगवान ,हेर्नुहोस पुरा घटनाको भिडियो